FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA : Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina
Feno ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. 20 janvier 2019
Naveriny nohamafisiny tamin’ny vahoaka malagasy indray ireo fampanantenana efa nataony hatramin’izay. Nisongadina tao anatin’ny kabariny fa hisy ny fiovana goavana hoentiny eto Madagasikara indrindra eo amin’ny fitantanana.
Namaranana ny lanonam-pitsarana natao tetsy Mahamasina ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina. Nanan-kambara ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo ny tenany, fanambaràna izay manome fanantenana sahady ho an’ny isan-tokantrano. Naveriny tao anatin’ny lahateny izay nataony indray ireo velirano nifanaovany tamin’ny vahoaka Malagasy hitondrany fampandrosoana ao anatin’ny fotoana fohy.
Anisany nahavelom-panantenana ny maro sahady ny nahitana ireo fiara roa tsy mataho-dalana sady tsy laitram-bala nomena hampiasain’ny mpitandro filaminana. Santionany roa no naseho ampahibemaso tetsy Mahamasina ny sabotsy teo, izay hoenti-manamarina fa tsy kobaka am-bava fotsiny ireny fampanantenana niraradraraka nandritra ny fampielezan-kevitra ireny.
Nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina koa fa “tsy hisy intsony ny olona ambony lalàna eto amin’ny firenena”, izay manao fihetsika mifanohitra amin’ny ara-dalàna dia omena azy ihany koa ny sazy mifanaraka amin’izany. Manomboka izao dia hipetraka ny lalàna rehetra eny anivon’ireo sampan-draharaham-panjakana maro, ka tsy azo ekena intsony ny gaboraraka. Nolazainy fa hisy ny sampana manokana izay apetraka eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika. Io sampana io no hihaino ny feon’ny vahoaka mitaraina ka izay fitarainana tonga ao dia tsy ho very maina fotsiny fa tsy maintsy hisy ny fanadihadiana hatao. “Tsy azo ekena mihitsy ny fanararaotana fahefana mba hoentina hakana tombontsoa manokana. Tsy ekeko ny gaboraraka, ny fandanilaniam-poana ny volam-panjakana. Tsy azo leferina ny fanaovana tolotr’asa tsy misy asa notanterahina akory”, hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin’ny lahateny nataony. Manomboka izao, araka izany dia ho hentitra ny fanaraha-maso ny asa rehetra mihodina eto amin’ny firenena. Ny asa rehetra izay hatao, hoy ny Filoha, dia tokony hifototra hatrany ho an’ny tombontsoam-bahoaka.
Ho avo roa heny ny herinaratra ao anatin’ny dimy taona
Na mbola tsy Filoham-pirenena akory aza ny Filoha Andry Rajoelina dia efa nametraka ho laharam-pahamehana hatrany ny sosialim-bahoaka. Noporofoiny izany tamin’ireny famonjeny ny mponina niharan’ny hain-tany tany Atsimon’ny Nosy ireny. Tao anatin’ny fampielezan-kevitra, raha nilatsa-kofidiana ny tenany dia nomeny tombon-dahiny hatrany izay fanatsarana ny fiainan’ny mponina amin’ny andavanandro izay satria ny Malagasy rehetra, hoy ny teniny ombieny ombieny, dia mila mahita ny anjara masoandrom-pampandrosoany.
Ny sabotsy lasa teo, naveriny tao anaty lahateniny indray fa ao anatin’ny dimy taona dia hiakatra avo roa heny ny fahafahan’ny vahoaka hisitraka herinaratra. Ny herinaratra no anisany hiantoka voalohany ny fampandrosoana. Mbola ambany ihany koa ny fahafahan’ny rehetra manjifa herinaratra ka anisan’ireo tetik’asa matip